अरनिको राजमार्गमा होटलको पीडाः कहिले दोहोरिएला पुरानो कथा ? - Karobar National Economic Daily
अरनिको राजमार्गमा होटलको पीडाः कहिले दोहोरिएला पुरानो कथा ?
query_builderJanuary 8, 2017 9:37 AM supervisor_accountकिशोर बुढाथोकी visibility923
सुनसान देखिएको बाह्रबिसेस्थित एक होटल ।
सिन्धुपाल्चोकः भूकम्पअघि अरनिको राजमार्गअन्तर्गत सिम्लेमा रहेको होटलको काउन्टरबाट बिहानदेखि बेलुकीसम्म कमला श्रेष्ठ बाहिर निस्कन भ्याउँदिन थिइन् । होटलमा ग्राहकको चाप थेग्न मुस्किलजस्तै पथ्र्यो । अहिले त्यो पुरानो कथा जस्तै भएको छ । पहिलाको तुलनामा अहिले उनको होटलमा १५ प्रतिशत पनि व्यापार हुँदैन ।
“भूकम्पअघि दैनिक लाखको हाराहारीमा व्यापार हुन्थ्यो, अहिले ठप्पजस्तै भएको छ,” उनी भन्छिन्, “नाका सञ्चालन नहुँदा यो बाटो सुनसानजस्तै भएकाले अहिले धेरै समय फुर्सद हुन्छ ।” पहिला उनको होटलमा दर्जनको हाराहारीमा कामदार टुट्दैनथे । अहिले कोही पनि छैनन् । “व्यापार भए पो राख्न सक्नु ?” उनी भन्छिन् । पहिला होटलमा सरसामान पनि भरिभराउ थियो । अहिले व्यापारमा मन्दी आएपछि राख्नसमेत नसकेको उनी सुनाउँछिन् ।
अँधेरीमा होटल व्यवसाय गर्ने पुनम श्रेष्ठको पनि कमलाको जस्तै पीडा छ । स्थानीय बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय सुरु गरेकी उनी अब बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछिन् । “तातोपानी जानेआउने यात्रु नहुँदा व्यवसाय मारमा परेको छ,” उनी भन्छिन्, “साना गाडी नचलेकै कारण व्यापार निकै घट्यो ।” उनले फाट्टफुट्ट आउने ठूला बसका यात्रुबाट भएको व्यापारले ब्याज तिर्न नपुग्ने सुनाइन् । “पहिलाको जस्तो दिन फर्कदैनन् अब,” श्रेष्ठ भन्छिन्, “सम्झेरै चित्त बुझाउनुपर्ने भएको छ ।”
गाउँमा रहेको खेत बन्धकी राखेर व्यवसाय गरेकी उनी अब होटल बन्द गरेर अर्कै काम गर्ने सोचमा छिन् । “ऋण गरेर लगानी गरियो, साउँको आधा पनि नउठ्दै भूकम्प आयो,” उनले भनिन्, “यो व्यवसायबाट अब उँभो लाग्ने छाँटकाँट छैन ।” नाका खुल्ने बजार हल्ला सुनेकी उनलाई भने विश्वास छैन । “बल्ल हल्ला सुनेकी छु तातोपानी खुल्छ भनेर” पुनम भन्छिन्, “नाका खुल्ला, मान्छे आउलान् भनेर पर्खदा कमाईं गर्ने गाउँको खेत लिलामी भइसक्छ ।”
कमला र पुनम मात्रै हैन, धेरै लगानी गरेर राजमार्गका विभिन्न स्थानमा व्यवसाय सुरु गरेका अधिकांश व्यवसायीको यस्तै अवस्था छ । केही व्यापारी आफ्नो होटल बन्द गर्ने मनस्थितिमा छन् भने केहीले बन्दसमेत गरिसकेका छन् । काभ्रेको दोलालघाटदेखि चीनको सीमा गाउँ तातोपानीसम्मको ६५ किलोमिटरमा रहेका सयौं होटल अहिले घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
यो क्षेत्रमा मात्रै साना ठूला गरी २ सयभन्दा बढी होटल थिए । बाह्रबिसेमा वेभ थकाली भान्छा घर सञ्चालन गरिरहेका छिरिङ लामा पनि अहिले मुस्किल परिरहेका बताउँछन् । “भूकम्पअघि व्यापार राम्रै थियो, अहिले निकै खस्केको छ,” उनी भन्छन्, “लगानी उठाउन नसक्ने अवस्था भइसक्यो ।”
“भूकम्पअघि निकै चहलपहल थियो, अहिले सुनसान छ,” खाडीचौरका होटल सञ्चालक सुनिल श्रेष्ठ भन्छन्, “व्यापार शून्यको अवस्थामा आएपछि आफैले पनि कामदार हटाएको छु ।” उनकाअनुसार भूकम्पपछि खाडीचौर, बाह्रबिसे, नयाँपुलस्थित झोलुङ्गेपुलमा गरी झन्डै १० वटा होटल बन्द भएका छन् ।
बञ्जी जम्पिङका लागि आउनेहरूबाट होटल व्यवसाय बढेको थियो । अहिले बन्जी गर्न आउनेको संख्या अत्यन्तै न्यून भएपछि व्यवसायीहरु घाटामा छन् । बन्जी गर्न पनि भूकम्पअघि साता दस÷दिनमा सय नाघ्नेमा अहिले बढीमा २५ जना जति हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् । तीमध्येमा पनि सबै नेपाली मात्रै हुने गरेका छन् । होटल व्यवसाय गरेर बसेकाहरू अहिले वैदेशिक रोजगारीमा पलायनसमेत भएको स्थानीय बताउँछन् ।
अरनिको राजमार्गको काठमाडौंदेखि बाह्रसिेसम्म केही चहलपहल भने छ । तर, यो चहलपहलले व्यवसायीलाई थेग्दैन । बाह्रविसेमाथि लिपिङसम्मको अवस्था झनै दयनीय छ । भूकम्पपछि बिस्तारै उठ्न थालेको व्यवसायलाई भोटेकोशी बाढीले तहसनहस बनाइदियो । तातोपानीदेखि लिपिङसम्मका झण्डै १ सय होटल अहिले छैन । भूकम्पअघि त्यहाँ अत्यधिक चहलपहल हुन्थ्यो ।
“अहिले तातोपानीमा २÷३ वटा मात्रै होटल छन्,” स्थानीय कामी शेर्पा भन्छन्, “तातोपानी धारा नुहाउन आउनेले होटललाई थेगिरहेका छन् ।” उनकाअनुसार तातोपानी, लिपिङ बजार पहिलाकै अवस्थामा फर्कन छिट्टै नाका खोलिनुपर्छ । नाका खुलेपनि होटल व्यवसायले चाँडै गति लिनेमा उनले शंका व्यक्त गरे ।
तातोपानी र लिपिङका होटलमा मात्रै दैनिक लाखभन्दा बढी कारोबार हुने गरेकोमा अहिले शून्यमा झरेको सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कमलकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । “भूकम्पअघि लिपिङका होटल पूरै खचाखच हुन्थे, अहिले त्यो सपनाजस्तै भएको छ,” उनले थपे, “नाका सञ्चालन गर्नसके त्यो पुरानो कथा दोहोरिन समय लाग्दैन ।”
भूकम्प होटल अरनिको राजमार्ग सुनसान